Soo-saareyaasha JACKET - Shiinaha JACKET Soo-saaraha & Warshadaha
Naagaha dibedda ku shaqeeya ee jaakadaha dab-damiska ka shaqeeya ayaa tayo fiican leh
Xitaa markaad u maleyneyso in lakabyadu ay sax yihiin, mararka qaarkood dabayshu waxay ka dhigi kartaa mid aad u qabow. Haddii aad joogtid buur dabeyl leh oo dalka ka mid ah, ama aad eygaaga ka baxeyso guriga, waxaan ka faa'iideysan karnaa haweenka u taagan dabaysha, taas oo naga caawinaysa inaan kululeynno oo qallalan. Waxaan bixinaa tiro fara badan oo ah dabeylaha ugu dambeeya ee ragga iyo jaakadaha loogu talagalay inay ku xirnaadaan diirimaad oo ay dabeyshu u daciifaan.
Kabaha jaakadaha ee haweenka waxaa loogu talagalay jawiga xad dhaafka ah waxaana sifiican looga tolay maro fidsan oo ay ka buuxaan alaabo jilicsan. Waxay leeyihiin gogosha jilicsan, gacmo dhaadheer oo leh shaati dabacsan, silsilado hawo ah oo gacanta hoostiisa ah, goonno baraf ah oo laga saari karo, jeebka garka iyo jeebadaha biyaha ka celiya laba jeelood oo go'an. Hawlaha farsamada ee leh xorriyadda dhaqdhaqaaqa ugu badan sida xusullada foorarka
Dukaan sare oo tayo sare leh oo ay kuxiran yihiin SoftshellJacket Bannaanka
Jaakad jilicsan oo jilicsan oo daboolan ayaa ah jaakad diiran oo isku dhafan oo sare u qaadaysa raaxada iyo waxqabadka. Cirifka, daboolka la hagaajin karo iyo dahaadhka DWR ayaa bixiya dabayl iyo iska caabin biyo oo aad u fiican, halka dharka jirkiisuna yahay mid laastik ah oo qeexan waana lagu qaadi karaa. Way ku fiican tahay isboortiga, laakiin in yar oo dheeri ah oo dheeri ah, marka marka cimiladu xun tahay, waad lakabin kartaa.